VaTsvangirai Vanoti Mauto Haafanire Kupinda Munyaya dzeMatongerwo eNyika
WASHINGTON — Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, neChishanu vakasimudza nyaya yekuti mauto asave nechekuita nenyaya yesarudzo sezvo zvichizokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika.
VaTsvangirai vataura mashoko aya pamusangano weNational Security Council waitwa muHarare. Bato reMDC-T rinoti harisi kufara nenyaya yekuti pane mauto ari kuendeswa mumaruwa uye nyaya yekuti vamwe vakuru vemauto vanopota vachitaura mashoko ekutyisidzira vanhu.
Vange vari pamusangano weChishanu mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutevedzeri wavo, Amai Joyce Mujuru, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, gurukota rezvevasori, VaSydney Sekeramai, gurukota muhofisi yaVaMugabe, VaDidymus Mutasa, gurukota rezvemari, VaTendai Biti, uye gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma.
Vamwe vapinda mumusangano uyu mukuru wemauto, General Constantine Chiwenga, mukuru wemauto emuchadenga, VaPerence Shiri, uye mukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, vange vakamirirwa nevatevedzeri vavo, mukuru wemajeri, VaParadzai Zimhondi naVaPhilip Valerio Sibanda mumwe mukuru wemauto.
Vamwe vevapinda mumusangano uyu vanoti wafamba hawo zvakanaka kunyange VaMnangagwa varamba nyaya yekuti vari kuendesa mauto kumaruwa kunovhundutsira vanhu.
Mauto agara achikonzera mutauro munyika nenyaya yekusatevedzera mutemo wekuti vasapindire munyaya dzezve matongerwo enyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, VaJeremiah Bamu, vanoti mauto anofanira kuvandudza mashandiro awo.